Onyinye Ụlọ Ahịa nke enweghị atụ China Manufacturer
Nkọwa:Ngwá Agha Na-ekpuchi Ngwá Agha Steam,Ntugharị Na-enweghị Ngwá Ngwá Steam,Onye na-enweghị atụ na-enweghị atụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe Mgbochi Na-ekpocha Ala > Onyinye Ụlọ Ahịa nke enweghị atụ
Mee ka ahụmahụ ị na-ahụ
Ị chọrọ ịcha na mmiri na-enweghị mmiri ọ bụla? Ị ga-anwale onye na-eme anyị maka enyo na-enyo enyo. Mee ka enyo anyị na-agbanye n'azụ mirror, gbanye ọkụ eletrik na ị nwere ike ịnụ ụtọ ịsa ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Enyo enyo n'enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ebe ọ bụla. Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekesa ihu ọma dị na mbara igwe ahụ, na-egbochi mmiri ka ọ ghara ịmalite mgbe ị na-asa ahụ ma ọ bụ saa ahụ. Nkwado nke nkwụnye onwe onye na-enye ngwa ngwa ngwa ọ bụla na-enyo enyo na nkeji ole na ole.
Anyị nwere ugo nha nke atọ kpo oku
Anyị na-enyekwa ọrụ ahaziri iche.
Ị nwere ike ịdọ aro nha gị, okpomọkụ, voltaji, ike ka anyị wee nwee ike inye gị ngwọta oku maka ya.
Echekwala ngwaahịa anyị iji hụ ụkpụrụ CE, RoHS, Ul, ETL, àgwà dị oke mma na ịsọ mpi nke ngwaahịa anyị na-eme ka anyị bụrụ onye ha na ya na-akpachi anya nke ndị na-ahụ maka ngwaahịa, dị ka, Samsung, LG, Simfer, Kohler , Panasonic, BROAN, wdg .Quality bụ kpamkpam n'aka.
Voltage ọsọ ọsọ: AC 230V
Nkwụsị mbụ: 1603-1959Ω
Ike: 30W ± 10%
akwa mgbaaka na-eguzogide: 3750V / 100mA 3s
nsogbu njehie: ≥3Kgf / 1min
2. Ịkpọgharị bọmbụ eletrik na-arụ ọrụ ọbụna, enweghị ike ikpochapụ ihe ọhụụ
3. Na nkwụnye na azụ (DS-80LG)
4. Site na PVC abụọ isi, 2 x 0.75 mm square, ogologo n'èzí 700 mm + 10 -0
5. Njide na-eduzi na mkpuchi plastik, n'ime akpa silicon (XS1110B)
6. Ndepụta ndị ahịa na- ekpo ọkụ na mbara ala nke nwere ihe ngosi nke 0.125 PET Igwe ihe nkeda na -emepụta , ihe nkedo ihu-ihu nke nwere ihu abụọ kwadoro akwukwo kwesiri ka ewepu ya
Windstopper N'èzí Sports ski Gloves Kpọtụrụ ugbu a
Uwe mmiri na-ekpo ọkụ eletrik akwa akwa na batrị Kpọtụrụ ugbu a
Igwekota windo na-ekpo ọkụ windo na mkpịsị aka Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Eletriki Ebere Igwe Na-ekpo Ọkụ Infrared Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá Agha Na-ekpuchi Ngwá Agha Steam Ntugharị Na-enweghị Ngwá Ngwá Steam Onye na-enweghị atụ na-enweghị atụ Ngwá Agha Nchedo Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha na UL Egwuregwu Na-ekpuchi Egwuregwu Steam Ngwá Agha Ngwá Agha Carbon Fiber